Ulwazi ngezifo zokukhusela ubhubhane esele zinayo okanye kungekudala ziya kusebenza, ekuqhambukeni kwangoku kufuneka kwenziwe? 1. Ungayinxiba njani ngokufanelekileyo imaski elahliweyo xa usiya emsebenzini.Zama ukungathathi izithuthi zikawonkewonke, kuyacetyiswa ukuhamba, ibhayisekile okanye ukuthatha imoto yabucala, ibhasi egxothiweyo ukuya emsebenzini.Ukuba kufuneka usebenzise izithuthi zikawonke-wonke, qiniseka ukunxiba imask. Ngamaxesha onke.Zama ukunqanda ukuchukumisa izinto ezibhasini.
2, indlela yokungena esakhiweni ngaphambi kokungena eofisini yokwamkela uvavanyo lobushushu, iqondo lobushushu liqhelekileyo linokungena kwisakhiwo, kwaye bahlambe izandla kwigumbi lokuhlambela.Ukuba ubushushu bomzimba budlula i-37.2 ℃, nceda ungangeni kwisakhiwo somsebenzi , kwaye ugoduke ukuze ujonge kwaye uphumle. Ukuba kuyimfuneko, yiya esibhedlele ukuze ufumane unyango.
3. Gcina indawo yeofisi icocekile kwaye ingena umoya kangangemizuzu engama-20 ukuya kwengama-30 kathathu ngemini. Nceda ugcine ubushushu xa ungena umoya.Vala umgama ongaphezulu kwe-1 yemitha phakathi kwabantu, kwaye unxibe iimaski xa abantu abaninzi besebenza.Keep ukuhlamba izandla kunye nokusela amanzi rhoqo.Amacala omamkeli anxiba iimaski.
4. Kucetyiswa ukunxiba imask kunye nokuhlamba izandla ngaphambi kokungena kwigumbi lokuhlangana.Ithuba lokuhlangana labasebenzi lingaphezulu kwemitha enye.Ukunciphisa uxinzelelo lweentlanganiso, lawula ixesha lendibano, ixesha lendibano lide kakhulu, vula iwindow yokungena .Indawo kunye nefenitshala mazibulawe iintsholongwane emva kwentlanganiso.
5. Iholo yokutyela yamkela izidlo ezahlukileyo ukuthintela abasebenzi abantsundu.Ivenkile yokutyela iye yabulala iintsholongwane kanye ngemini, kwaye iitafile zokutyela nezitulo zichongiweyo emva kokuba zisetyenzisiwe. Sukuxuba ukutya okuluhlaza nokutya okuphekiweyo. Kuphephe inyama ekrwada.ukutya ukutya okunesondlo kumgubo wokutya, ioyile encinci yetyiwa incasa.6. Nxiba imaski yokuhlawula xa uza kuphuma emsebenzini. Hlamba izandla zakho kwaye ubulale iintsholongwane kuqala emva kokuba ususe imaski ekhaya.Cima ifowuni kunye nezitshixo ezosula isisu okanye i-75% yotywala.Kusebenzisa igumbi lingene kwaye licocekile, thintela abantu abaninzi ukuba bahlangane.
7. Phumani nizinxibe iimaski ukunqanda izixinene ezimnyama.Keqa umgama ongaphezulu kwe-1mitha yabantu kwaye niphephe ukuhlala kwiindawo zikawonke wonke ixesha elide.
8. Cebisa ngemisebenzi efanelekileyo nenokulinganisa ngexesha lomsebenzi kunye nokuphumla ukuqinisekisa impilo entle.
Iindawo zoluntu ziya kubulala iintsholongwane mihla le kwigumbi lokuhlambela, kwigumbi lokuhlangana, kwigumbi eliphezulu lendibano, kwizitepusi, kwindlu yangasese nakwezinye iindawo zikawonkewonke, kwaye ukubulala intsholongwane kuya kusetyenziswa kude kangangoko kunokwenzeka. ukuxuba.
10. Kucetyiswa ukosula ingaphakathi kunye nomnyango ophethe imoto ekhethekileyo kuhambo olusemthethweni olunama-75% otywala kanye ngemini. Thatha ibhasi evaliweyo ukuba unxibe imask, kucetyiswa ukuba ibhasi yokuhamba isebenzisa utywala abangama-75% Kwangaphakathi emotweni kunye nomnyango ophethe kusula ukubulala iintsholongwane.
I-11, ukulungiswa kwezinto zokuthengwa kwempahla nezinto ezisetyenziselwa abasebenzi okanye abathengisi kufuneka banxibe iimaski kunye neiglavu zerabha elahliweyo, ukunqande ukunxibelelana ngqo nenyama kunye nezinto zenkuku, ukuhlamba izandla ngexesha elifanelekileyo emva kweglavu. abasebenzi kufuneka banxibe imaski basebenze, kwaye bacele ngokungqongqo kwaye babhalise inqanaba labasebenzi bangaphandle, bafumanise ingxelo engaqhelekanga ngexesha elifanelekileyo.
I-12, utyelelo olusemthethweni malunga nokwenza kufuneka unxibe imaski.Ngaphambi kokuba ungene e-ofisini, thatha uvavanyo lobushushu kwaye wazise imbali yokuvezwa kwe-hubei kunye neempawu ezinjengomkhuhlane, ukukhohlela kunye ne-dyspnea.Ngokungabikho kwale mibandela ingentla, kunye nomzimba iqondo lobushushu kwi-37.2 ° iimeko eziqhelekileyo, zinokungena ngaphakathi kwishishini lokwakha.
Hlamba izandla ngaphambi nasemva kokudlula amaxwebhu ephepha, kwaye unxibe imask xa uhambisa amaxwebhu.14, ukungafikeleli kwiminxeba indlela yokwenza iselfowuni yocingo 75% yotywala obusula kabini ngemini, ukuba isetyenziswa rhoqo inokunyuswa ngokufanelekileyo.